Izindaba - I-C-star 2020 ne-Huayuemei Lighting
I-C-star 2020 ne-Huayuemei Lighting
I-C-star - IShanghai's International Trade Fair for Solutions and Trends All about Retail, eyilungu lomndeni we-EuroShop Trade fairs, ikhule ngokushesha selokhu yaqala ngonyaka ka-2015 futhi isibe yindawo enkulu ethintekayo embonini yezokuthengisa kulo lonke elaseChina.
I-C-star 2020 ibanjwe ngempumelelo ngoSepthemba 2-4th, 2020 eShanghai New International Expo Center. Ezinsukwini ezintathu eziyimpumelelo, i-C-star yamukele umbukiso we-134 nezivakashi eziyi-9,006 eziqeqeshiwe.
Imboni yezokuthengisa yaseChina idlule koguquko olukhulu ngenxa ye-COVID-19 ezinyangeni ezimbalwa nje. I-China izuze impumelelo enkulu ekulweni ne-COVID-19. Sekuyisikhathi esifanele ukuthi sicabange ukuthi singazilungiselela kanjani isibhakabhaka esilandelayoUHuayuemei Lighting ubambe iqhaza ngokuqinile kulo mbukiso. Abasebenzi balo mbukiso baphinde balungisa izindlela zokuvimbela ubhadane kulo mbukiso.
Wonke umuntu udinga ukugqoka imaski futhi agcine ibanga lomphakathi. Sinosuku olulodwa lokwakha idokodo lethu. I-C-star 2020 ibanjwe ngempumelelo ngoSepthemba 2-4th, 2020 eShanghai New International Expo Center. Baningi abantu abavakashela lo mbukiso.
Idokodo lethu liheha abantu abaningi ukuthi bavakashele, ngoba i-RGB Dynamic Curtain LED yethu iboniswe kuleli dokodo.
Umklami wethu usebenzisa umbala ukugqamisa isihloko salo mbukiso, Kuyadonsa amehlo.
Yonke ikhethini lethu elikhanyayo le-LED Strip lingancishiswa, futhi kungenziwa ngezifiso zokushisa kombala ngokuya ngesicelo sakho.
I-RGB Dynamic Curtain LED Strip isakhanya kakhulu etendeni, iheha abantu abaningi ukuthi bayivakashele. Isebenzisa iphrothokholi ye-DMX512, futhi isebenzise ukulawula kwe-K-8000C ukuze ihlelwe.
Ungaklama ukuthi yikuphi ukugqwayiza okufunayo, ungasebenzisa iDynamic Curtain LED Strip yethu ukuze ihlelwe. Lokho kuzokwenza idokodo lakho libe likhulu!
Sibambe iqhaza kwi-C-star ibaluleke kakhulu ngesikhathi somnotho!
Kubaluleke kakhulu kithi, masazise imininingwane ethe xaxa mayelana nokukhanyisa kwe-LED, sizozama konke okusemandleni ethu ukwenza ngcono ikhwalithi yomkhiqizo wethu nokuklama umkhiqizo omusha.
Masikubeke lokhu phambili futhi ungaphuthelwa yithuba lakho ngo-2021.